Fikarohana momba ny famakafakana ny vidin'ny famokarana sy ny fanaraha-maso ny fanariana fampiasam-bola | Yingyi
Fametrahana fampiasam-bola Ny famokarana dia ahitana dingana efatra: fanomanana module, fanomanana akorandriaka, fandoroana firakaary ny fitsaboana aorian'ny fandidiana. Satria ny fomba dingana dia tsy dingana isan-karazany ihany, vokatra mikoriana Complex, lava famokarana tsingerin'ny, ary ny fanariana dingana dia tena matihanina. Noho izany, ny fanjifana fitaovana famokarana avy amin'ny fampidirana ho amin'ny vokatra dia tsy intuitive sy mazava, ary ny isan-karazany ny fampiasana dia sarotra sy ny vola dia tsy mora Amin'izany fotoana izany, noho ny fanariana isan-karazany ny vokatra sy ny vokatra, ary koa ny fitomboana. fampiasam-bola amin'ny fanesorana vovoka sy ny fiarovana ny tontolo iainana, nitarika ny fampiasam-bola fanariana orinasa famakafakana ny vidiny sy ny fanaraha-maso ny vidiny Ny rafitra dia sarotra kokoa.
1. Famoronana fototra ny vidin'ny famokarana ny orinasa fanariana fampiasam-bola
Ny vidin'ny famokarana amin'ny fanariana fampiasam-bola dia manondro ny vidiny mifandraika mivantana amin'ny famokarana sy ny fampandehanan'ny orinasa Ny vidin'ny famokarana ny fanariana fampiasam-bola dia mizara ho vidin'ny fitaovana, ny vidin'ny asa mivantana ary ny vidin'ny famokarana. Ny vola lany amin'ny tontolo iainana dia ampidirina misaraka amin'ny vidin'ny famokarana amin'ny fanariana fampiasam-bola.
1.1 Vidin'ny fitaovana
Ny vidin'ny fitaovana mivantana ampiasain'ny orinasa amin'ny dingan'ny famokarana vokatra dia antsoina hoe vidin'ny fitaovana, izay azo zaraina amin'ny akora sy akora fototra isan-karazany izay mahaforona ny orinasa lehibe amin'ny vokatra araka ny fiasa samihafa. Solika sy hery lanin'ny dingana; Ampifandraisina amin'ny maha-zava-dehibe ny vokatra, na mandray anjara amin'ny fananganana ny vokatra sy ny fihinanana fitaovana fanampiny.
1.2 Asa mivantana
Enti-milaza ny karama sy ny fiahiana ny mpiasa mpamokatra izay mandray anjara mivantana amin'ny famokarana vokatra.
1.3 Ny fandaniana amin'ny famokarana
Enti-milaza ny fandaniana ara-pitantanana isan-karazany ataon'ny vondrona famokarana tsirairay amin'ny orinasa fanariana fampiasam-bola ho an'ny fandaminana sy ny fitantanana ny famokarana, ary koa ny fandaniana amin'ny fikojakojana sy ny fandaniana amin'ny milina sy ny fitaovana.
1.4 Vidin'ny kalitao
Ny vidin'ny kalitao dia manondro ny totalin'ny vidin'ny orinasa mba hiantohana ny haavon'ny vokatra voatondro sy ny fitantanana ny kalitao manontolo, ary koa ny fatiantoka vokatry ny tsy fahatratrarana ny fenitry ny kalitao voatondro.
1.5 Vidin'ny tontolo iainana
Ny vola lany amin'ny tontolo iainana dia manondro ny vola raisina na takiana amin'ny fandraisana fepetra amin'ny fiantraikan'ny famokarana fanariana amin'ny tontolo iainana mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana, ary koa ny fampiharana ny tanjona ara-tontolo iainana ataon'ny orinasa Ny fandaniana hafa aloa amin'ny fenitra sy ny fepetra. indrindra ahitana ireto lafiny manaraka ireto 1) ny vidin'ny fampihenana ny entona mandoto (2) ny sandan'ny famerenana, ny fampiasana indray ary ny fanariana fako (3) ny vidin'ny fividianana maitso (4) ny sandan'ny fitantanana ny tontolo iainana (5) ny sandan'ny hetsika ara-tsosialy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana (6) ny vidin'ny fatiantoka ara-tontolo iainana
2. Fampiasam-bola fanariana ny famokarana fitaovana fandaniam-bola kaonty
Ny vidin'ny fitaovana no singa fototra amin'ny vidin'ny fanariana fampiasam-bola. Ao amin'ny tena famokarana fanariana, batch ny fitaovana matetika no laniny isan-karazany castings. Ahoana no hahatonga ny vidin'ny fitaovana ho mitombina
Ny fanangonam-bokatra sy ny fizarana vokatra isan-karazany dia mendrika eritreretina. Araka ny fizotran'ny famokarana fampiasam-bola fanariana, ny vidin'ny fitaovana dia azo angonina sy zaraina amin'ny lasitra fanjifana sy ny akorandriaka akorandriaka Material, fiampangana fanjifana 3 lafiny lehibe.
2.1 Fanjifana bobongolo
Amin'ny fanariana fampiasam-bola, ny fitaovana maty dia azo averina. Ny fanjifana bobongolo amin'ny famokarana dia ahitana ny fahaverezan'ny fanarenana sy ny fahaverezan'ny savoka sisa tavela. Rehefa raikitra amin'ny ankapobeny ny dingan'ny fanodinana bobongolo, dia azo refesina Kajy ny quota fanjifana sy ny kaontim-bola.
2.2 Karazana akorandriaka fanjifana ara-materialy
Ny fitaovana akorandriaka dia ahitana vovoka refractory, fasika, binder sy ny sisa. Ny akora ampiasaina amin'ny fanaovana akorandriaka dia mifandray amin'ny velaran'ny akorandriaka. Rehefa azo antoka ny akorany akorany, coating sosona isa sy ny dingana, dia afaka mampiasa ny bobongolo Group faritra ambonin'ny na karazana akorandriaka lanja mba hanokana ny vidin'ny fitaovana.
2.3 Fanjifana fiampangana
Ny fitaovana metaly amin'ny fanariana fampiasam-bola dia miempo mifanaraka amin'ny lafaoro. Rehefa manao kajy ny fampidirana entana, ny lafaoro dia raisina ho toy ny vondrona, ary ny akora metaly sy ny fanariana ny lafaoro tsirairay dia voarakitra araka ny "lafaoro lafaoro" Karazana sy ny habeny.
2.4 Kajy ny vidin'ny fitaovana fanariana
Amin'ny alalan'ny kaonty etsy ambony, dia nanao kajy ny vidin'ny lasitra very ho an'ny karazana fanariana vokatra tokana, ny vidin'ny consumable akora akora ho an'ny famokarana vokatra tokana sy ny vidin'ny metaly ho an'ny vondrona vokatra.
3. Fomba hifehezana ny vidin'ny famokarana amin'ny orinasa fanariana fampiasam-bola
Ao amin'ny fampiasam-bola manontolo fanariana ny vidin'ny famokarana ny vidin'ny ara-materialy dia ny ampahany lehibe indrindra sy ny fiantraikany, ka ny fanaraha-maso ny ara-nofo vidiny no ifantohan'ny fanaraha-maso ny vidiny manontolo. Amin'ny ankapobeny, ny vidin'ny asa mivantana sy ny famokarana dia tsy dia misy fiantraikany amin'ny vidin'ny famokarana, fa amin'ny tranga manokana, ny vidin'ny kalitao sy ny vidin'ny tontolo iainana, toy ny tahan'ny vokatra sy ny tahan'ny fandavana, dia misy fiantraikany lehibe amin'ny vidin'ny famokarana Impact. Ho an'ireo lafin-javatra misy fiantraikany amin'ny vidin'ny famokarana orinasa dia ilaina ny mamolavola fepetra fanaraha-maso nokendrena.
3.1 Ahena ny fanjifana fitaovana
Amin'ny famokarana tena izy, ny fitaovana ao anatin'ny fetran'ny dingana dia tokony homanina sy atokana araka ny drafitra famokarana, ary ny fitaovana tsy ampiasaina mivantana amin'ny famokarana vokatra tsy ao anatin'ny fetran'ny fanjifana dia hojerena tsikelikely ny fizarana Batch, amin'ny fitahirizana ny fitaovana eny an-tsaha manatsara ny tahan'ny fampiasana ara-materialy, amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fizotran'ny fanatanterahana ara-tsiansa sy ara-dalàna ny akora, mba hampihenana ny tahan'ny fanavaozana ny fitaovana vaovao Ny vidiny.
3.2 Hatsarao ny vokatra vita ary hampihena ny tahan'ny fanariana
Ny famolavolana dingana sy ny fitantanana ny tranokala no antony roa lehibe misy fiantraikany amin'ny vokatra. Ny fanavaozana ny dingana dia tokony hatao amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny dingana alohan'ny fampiasam-bola faobe sy ny fanofanana ireo mpamorona dingana avo lenta. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fandatsahana marina ny casters sy ny fanatsarana ny fizotry ny saha, dia azo hatsaraina ny tahan'ny fampiasana ny rano firaka. Optimize ny fitantanana ny tranokala.
3.3 Mitsitsy angovo ary mampihena ny fandaniana angovo
Ny fanjifana angovo amin'ny indostrian'ny fandrefesana dia mitentina 23% ~ 62% amin'ny fanjifana angovo amin'ny indostrian'ny milina. Ny fanjifana angovo dia coke, saribao ary herinaratra, arahin'ny rivotra mipoitra, oksizenina ary rano. Indostria Foundry any Shina Ny fahombiazan'ny angovo dia 15% ~ 25% ihany. Ohatra, ny fitaovana fandrendrehana sy ny fanjifana angovo fandrendrehana dia mitentina eo amin'ny 50% amin'ny fandaniana angovo amin'ny famokarana fanariana manontolo. Ny fanatsarana ny fitaovana fandrendrehana mihemotra dia mety hampihena ny fanjifana angovo amin'ny famokarana fanariana Ny fanalahidy.
3.4 Hamafisina ny fiarovana ny tontolo iainana ary hampiroborobo ny fikarakarana sy ny fanodinana ny fako fanariana
Ny fanodinkodinana ny fako dia tsy vitan'ny hoe mampihena ny fahaverezan'ny fitaovana ilaina, fa mampihena mivantana ny vidiny. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny fomba fijery ny vidin'ny tontolo iainana, ny olana amin'ny fikarakarana fako dia ao amin'ny famotsorana ny fandaniana toy ny fitsaboana farany sy ny fanodinana ny fasika fako nodiovina taorian'ny fanariana akorandriaka, mitahiry ny vidiny, ny fampihenana ny fako angovo ary ny fampihenana ny fandotoana ny tontolo iainana.
3.5 Fanatsarana ny famokaran'ny asa
Ny fampitomboana ny vokatra azo avy amin'ny asa dia mety hampihena ny vola lany isaky ny singam-bokatra. Manatsara ny famokarana asa, ilaina ny manatsara hatrany ny haavon'ny famokarana mekanika, ny fampiasana ny teknolojia vaovao, ny dingana vaovao, mba hahazoana ny specialization.